Diso lasa mihinana fahatany ny antibitioka loatra mantsy ny Malagasy raha araka ny fanazavany, hany ka ahiana tsy hahafaty ireo karazana mikraoba tafiditra ao anatin’ny vatan’olombelona intsony ity karazam-panafody fiarovana ity. Mitady hitovy amin’ny any Azia isika eto Madagasikara, hoy hatrany ny dokotera Mora Edwine izay zary lasa firenena iray tsy ahitana antibitioka intsony ankehitriny. Mba hahafahana miaro ny fahasalaman’ny olombelona sy hanomezan-danja ny antibiotika ary dia nandray fanapahan-kevitra ny fikambanana fa tsy azo omena ny mpanjifa intsony izy ireny manomboka izao raha tsy mitondra taratasy mazava avy any amin’ny dokotera ireto farany. Ny amoxycilline, ny tetracycline no tena voakasik’izany amin’ny ankapobeny izay raisin’ny olona hatrany na dia serisery kely monja aza no mahazo azy. Nomarihin’ity dokotera ity moa fa tsy misy antibitioka vaovao intsony eto amintsika ary raha misy aza dia mety ho lafobe tsy ho takatry ny olona ka tsy maintsy handraisana fepetra ireo izay misy eo am-pelatanana.